Ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya oo saakay isaga baxay Moqokori iyo Al-shabaab oo la wareegtay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya oo saakay isaga baxay Moqokori iyo Al-shabaab oo la wareegtay
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Moqokori ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ciidamada militeriga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ay gebi-ahaan isaga baxeen deegaankaas, iyadoona ilaa iyo haatan la ogeyn meeshii ay u dhaqaaqeen.
Ciidamadaan oo mudooyinkii ugu dambeysay ku sugnaaa deegaanka Moqokori ayaa sida la sheegay laga war-helay in aroortii saakay ay halmar isaga baxeen deegaanka, waxaana muddo saacado kadib ahna halkaasi la wareegay ciidamo ka tirsan Xarakada Al-shabaab.
Ilaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeeysa in ciidamada militeriga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ay isaga baxaan deegaankaasi Moqokori, waxaana maanta deegaankaasi isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah oo usoo daawasho tagay sida ay Al-shabaab usoo galeen deegaanka.
Xiriir aynu la sameynay mas’uuliyiinta deegaanka Moqokori ayaa inoo suurto galin, balse warar madax-banaan ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamadaasi isaga baxay deegaankaasi ay u ruqaansadeen dhinaca degmada Maxaas ee gobolka HIiraan.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ay isaga baxaan deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan, waxaana deegaanada ay ka baxaan ciidamadaasi islamarkiiba dib ula wareega dagaalyahadda Al-shabaab.